मंसिर २०७५ ५	बुधबार, 21 Nov 2018 त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष
सुर्योदय: बिहान ०६:२६, सुर्यास्त: बेलुका ०५:०५ चन्द्रास्त: बिहान ०४:०९, चन्द्रोदय: दिउँसो ०४:०१
६: कोजाग्रत पूर्णिमा
असोज २०७५ २८ 14 October 2018 आइतबार पञ्चमी, शुक्ल पक्ष पचली भैरव यात्रा
असोज २०७५ २९ 15 October 2018 सोमबार षष्ठी, शुक्ल पक्ष ग्रामिण महिला दिवस सरस्वती आवाहन विल्व निमन्त्रणा
३० असोज २०७५ 16 October 2018 मंगलबार सप्तमी, शुक्ल पक्ष खाद्य दिवस फूलपाती सरस्वती स्तुति
असोज २०७५ ३१ 17 October 2018 बुधबार अष्ठमी, शुक्ल पक्ष गरिबी निवारण दिवस महा अष्ठमी कालरात्रि सरस्वती विसर्जन
१ कार्तिक २०७५ 18 October 2018 बिहिबार नवमी, शुक्ल पक्ष तुला संक्रान्ती महा नवमी बौद्वावतार मन्वादि:
२ कार्तिक २०७५ 19 October 2018 शुक्रबार दशमी, शुक्ल पक्ष बिजया दशमी दुर्गा विसर्जन खड्गयात्रा सरस्वती विसर्जन
३ कार्तिक २०७५ 20 October 2018 शनिबार एकादशी, शुक्ल पक्ष पापांकुश एकादशी अन्नपूर्ण यात्रा
६ कार्तिक २०७५ 23 October 2018 मंगलबार चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष कोजाग्रत पूर्णिमा शरद पूर्णिमा
कार्तिक २०७५ ७ 24 October 2018 बुधबार पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष संयुक्तराष्ट्र दिवस अश्विन पूर्णिमा
१० कार्तिक २०७५ 27 October 2018 शनिबार तृतिया, कृष्ण पक्ष करवा चौथ संकष्टी चतुर्थी
कार्तिक २०७५ १४ 31 October 2018 बुधबार सप्तमी, कृष्ण पक्ष अहोई अष्टमी राधा कुण्ड स्नान अष्टमी व्रत
कार्तिक २०७५ १८4November 2018 आइतबार द्वादशी, कृष्ण पक्ष गोवत्स द्वादशी
१९ कार्तिक २०७५5November 2018 सोमबार त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष यमपञ्चक आरम्भ काग तिहार धन तेरस प्रदोष व्रत यमदीपदान
२० कार्तिक २०७५6November 2018 मंगलबार चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष कुकुर तिहार नरक चतुर्दशी
२१ कार्तिक २०७५7November 2018 बुधबार औंशी, कृष्ण पक्ष दिपावली लक्ष्मी पूजा कार्तिक औंसी दर्श औंसी सुखरात्रि
२२ कार्तिक २०७५ 8 November 2018 बिहिबार प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष गोवर्धन पूजा म्ह: पूजा चन्द्र दर्शन ने. सं. ११३९ प्रारम्भ
२३ कार्तिक २०७५9November 2018 शुक्रबार द्वितीया, शुक्ल पक्ष भाई टिका यम द्वितीया
कार्तिक २०७५ २६ 12 November 2018 सोमबार पञ्चमी, शुक्ल पक्ष निमुनिया दिवस लाभ पञ्चमी
कार्तिक २०७५ २९ 15 November 2018 बिहिबार सप्तमी, शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी अष्टमी व्रत मुख: अष्टमी
१ मंसिर २०७५ 17 November 2018 शनिबार नवमी, शुक्ल पक्ष वृश्चिक संक्रान्ती अक्षय नवमी कुष्माण्ड नवमी सत्य युगादि
वैकुण्ठ चतुर्दशी आज - मंसिर ५
विश्वेश्वर व्रत आज - मंसिर ५
टेलीभिजन दिवस आज - मंसिर ५
शिववैकुण्ठ चतुर्दशी भोलि - मंसिर ६
मणिकर्णिका स्नान भोलि - मंसिर ६
देव दिपावली भोलि - मंसिर ६
पूर्णिमा व्रत भोलि - मंसिर ६
गुरु नानक जयन्ती पर्सि - मंसिर ७
कार्तिक पूर्णिमा पर्सि - मंसिर ७
मन्वादि: पर्सि - मंसिर ७
चतुर्माश समाप्ति पर्सि - मंसिर ७
संकष्टी चतुर्थी ५ दिन पछि - मंसिर १०
कालभैरव जयन्ती ८ दिन पछि - मंसिर १३
अष्टमी व्रत ९ दिन पछि - मंसिर १४
एड्स दिवस १० दिन पछि - मंसिर १५
गुह्येश्वरी यात्रा ११ दिन पछि - मंसिर १६
उत्पतिका एकादशी १२ दिन पछि - मंसिर १७
अपाङ्ग दिवस १२ दिन पछि - मंसिर १७
प्रदोष व्रत १३ दिन पछि - मंसिर १८
बालाचह्रे पूजा १४ दिन पछि - मंसिर १९
मेष ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) स्वास्थ्यको दृश्यबाट धेरै राम्रो दिन। तपाईंको हँसिलो मनले तपाईंको इच्छित बल दिन्छ र तपाईंलाई विश्वस्त राख्नेछ।	आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ।	घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ - तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।	तपाईंले भिन्नै प्रकारको रोमान्स अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ।	यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो।	सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ।	आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको लागि संगै खाएर शुभ रात्री बिताउने अपेक्षित छ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ।	तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्।	दिनको पछिल्लो भागमा एउटा पुराना मित्रको भेटघाटले तपाईंको साँझ उज्यालो हुनेछ। तपाईंले आफ्ना सुनौला दिनहरूको याद गरेर आफ्नो बाल्यकालको सम्झना गर्नुहुनेछ।	लामो समयसम्म एक्लो काटेको समयको अन्त भयो - तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी पाउने समय आएको छ।	आफ्नो लक्ष्यतिर चुपचाप काम गर्नुहोस् र तपाईंले सफलता प्राप्त नगरूञ्जेल आफ्नो मनसाय खुलासा नगर्नुहोस्।	आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्।	तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शानदार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) आज गरेको दानले मानसिक शान्ति र आराम प्रदान गर्नेछ।	सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ।	तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ।	अनपेक्षित रोमान्टिक झुकावले बेलुकीतिर तपाईंको मन ढाक्नेछ।	तपाईंमा धेरै हासिल गर्ने क्षमता छ - त्यसैले तपाईंको बाटोमा आएका अवसर नछोड्नुहोस्।	तपाईंमध्ये कसैले टाढाको यात्रा गर्नुहुनेछ - यो धेरै व्यस्त हुनेछ - तर अत्यधिक फलदायी पनि हुनेछ।	आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) कुनै हटाउन नसकिने परिस्थितिले केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर तपाईंले आफ्नो समतोलन राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समस्याको समयाधान गर्ने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन।	तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ।	तपाईंले आफ्नो प्रतिष्ठामा एउटा नयाँ मणि थपेको कारण तपाईंको उपलब्धिले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको हौसला बढाउनेछ। आफुलाई अरूको आदर्श पात्र बनाउन कठिन प्रयास गर्नुहोस्।	तपाईंकी प्रेमीकाको नराम्रो व्यवहारले आज रोमान्समा बाधा पर्नेछ।	आज एउटा राम्रो कार्यको परिणामले कामका शत्रुहरू तपाईंका साथी हुन सक्छन्।	व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ।	आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य केही खराब हुन सक्छ।
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द - किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ।	तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ।	परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् - मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने - तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्।	आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्।	आफ्ना सहकर्मीहरूले तपाईंले सँधैं भन्दा आज राम्रो गरि बुझ्नेछन्।	घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ।	आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) पार्टीमा आफ्नो हतारे र हठी स्वभावमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि यसले विशेष गरेर पार्टीमा मुड बिगार्न सक्छ।	दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ।	साथीहरूसँगको सांझ अत्यधिक मनोरंजक र खुशीले भरिएको हुनेछ।	रोमान्टिक भेटघाट अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ तर लामो रहने छैन।	तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ।	आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्।	आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई गलत हो भन्नाले पूरा दिन विरक्तलाग्दो हुन सक्छ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) तपाईंको हँसिलो स्वभावले कसैलाई यस कौशलको विकास गर्न आफूलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्नेछ किनकि तपाईंले उसलाई यो कुरा बुझ्ने बनाउनुभयो कि खुशियाली भेला पारेको सम्पत्तिमा नभएर हामी भित्र हुन्छ।	तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् - कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्।	तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य तनाउ र चिन्ताको कारण बन्न सक्छ।	यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्।	तपाईंले अतिरिक्त ज्ञान र सीप प्राप्त गर्न केही अतिरिक्त समय र ऊर्जा प्रयोग गर्नाले अत्यन्तै लाभ हुनेछ।	तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ।	आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) तपाईंको अथाह प्रयास र परिवारका सदस्यहरूको समसामयिक सहयोगले इच्छित परिणाम ल्याउने थियो। तर अहिलेको झैं जाँगर कायम राख्न कठिन कार्य गरिरहनुहोस्।	मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्।	तपाईंले समयमा गरेको मद्दतले कसैलाई दुर्भाग्यको अनुभव गर्नबाट सुरक्षित गर्नेछ।	प्रेम यात्रा मीठो तर छोटो हुनेछ।	साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ।	आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्।	तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई नभएर अन्य कसैलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मौका दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाउन सक्नु हुनेछ।
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ।	तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ - तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ।	तपाईंले आजको खाली समयको लाभ लिनुहोस् र परिवारका सदस्यहरुसँग प्यारो समय खर्च गर्नुहोस्।	तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ।	तपाईंले काममा धेरै लाभ पाउनु हुनेछ।	आज तपाईं एउटा तारा झै व्यवहार गर्नुहोस् - तर केवल प्रशंसनीय कुरा गर्नुहोस्।	छुने, चुम्बन, अंकमाल आदि कुराको वैवाहिक जीवनमा विशेष महत्त्व छ। तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) तपाईंले आफुलाई साधारणभन्दा कम ऊर्जाको पाउनुहुनेछ - अतिरिक्त कामले आफुलाई भार नदिनुहोस् - केही आराम गर्नुहोस् र आफ्नो भेटघाट अर्को दिनको लागि मिलाउनुहोस्।	लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ।	यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ।	आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार / इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ।	आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् - तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ।	तपाईंको हास्यपूर्ण चरित्र तपाईंको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुनेछ।	आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) तपाईं आज ऊर्जाले पूर्ण हुनुहुनेछ र असाधारण कुरा गर्नुहुनेछ।	दीर्घ अवधिको आधारमा तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने पर्याप्त लाभ हुनेछ।	प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने।	आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ।	यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो।	तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने - त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ।	यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) विशेष गरेर हृदयरोगीहरूले कफी नलिनुहोस्।	तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ।	आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्न छोराछोरीलाई सहयोग गर्ने उचित समय।	आज, तपाईंलाई आफ्नो प्रेमीले तपाईंलाई सधैं प्रेम गर्नेछ भन्ने थाहा लाग्नेछ।	तपाईंसँग काममा कम मेल राख्ने मान्छेले पनि आज तपाईंसँग असल कुराकानी गर्नेछ।	सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन।	आफ्नो साथी उत्कृष्ट हुँदा जीवन साँच्चै नै सम्मोहित हुन्छ; तपाईंले आज यसको अनुभव गर्नु हुनेछ।
गुरु नानक जयन्ती ७ मंसिर, २ दिन
बाला चतुर्दशी २० मंसिर, १५ दिन
विवाह पञ्चमी २६ मंसिर, २१ दिन
उधौली पर्व ७ पौष, १ महिना १ दिन
योमरी पुन्हि ७ पौष, १ महिना १ दिन
तमु ल्होसार १५ पौष, १ महिना ९ दिन
नयाँ वर्ष (एडी) १७ पौष, १ महिना ११ दिन
तोल् ल्होसार २२ पौष, १ महिना १६ दिन
तिलको लड्डु खाने दिन १ माघ, १ महिना २५ दिन
श्री स्वस्थानी पूर्णिमा ७ माघ, २ महिना १ दिन
सोनम् ल्होसार २२ माघ, २ महिना १६ दिन
सरस्वती पूजा २७ माघ, २ महिना २१ दिन
भ्यालेन्टाइन डे २ फागुन, २ महिना २५ दिन
प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुन, ३ महिना ० दिन
महा शिवरात्रि २० फागुन, ३ महिना १३ दिन
ग्याल्बो ल्होसार २३ फागुन, ३ महिना १६ दिन
नारी दिवस २४ फागुन, ३ महिना १७ दिन
होली ६ चैत्र, ३ महिना २९ दिन
एप्रिल फूल डे १८ चैत्र, ४ महिना ११ दिन
घोडेजात्रा २२ चैत्र, ४ महिना १५ दिन
राम नवमी ३० चैत्र, ४ महिना २३ दिन
नयाँ वर्ष १ बैशाख, ४ महिना २४ दिन
महावीर जयन्ती ४ बैशाख, ४ महिना २७ दिन
लोकतन्त्र दिवस ११ बैशाख, ५ महिना ४ दिन
आमाको मुख हेर्ने दिन २१ बैशाख, ५ महिना १४ दिन
अक्षय तृतीया २४ बैशाख, ५ महिना १७ दिन
बुद्ध पूर्णिमा ४ जेष्ठ, ५ महिना २८ दिन
उभौली पर्व ४ जेष्ठ, ५ महिना २८ दिन
गणतन्त्र दिवस १५ जेष्ठ, ६ महिना ९ दिन
दहिचिउरा खाने दिन १५ आषाढ, ७ महिना ११ दिन
गुरु पूर्णिमा ३१ आषाढ, ७ महिना २७ दिन
खिर खाने दिन १५ श्रावन, ८ महिना १२ दिन
मित्रता दिवस १९ श्रावन, ८ महिना १६ दिन
नाग पञ्चमी २० श्रावन, ८ महिना १७ दिन
रक्षा बन्धन ३० श्रावन, ८ महिना २७ दिन
जनै पूर्णिमा ३० श्रावन, ८ महिना २७ दिन
गाईजात्रा ३१ श्रावन, ८ महिना २८ दिन
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी ७ भाद्र, ९ महिना ६ दिन
कुशे औंसी १३ भाद्र, ९ महिना १२ दिन
बुवाको मुख हेर्ने दिन १३ भाद्र, ९ महिना १२ दिन
हरितालीका तीज १५ भाद्र, ९ महिना १४ दिन
गणेश चतुर्थी १६ भाद्र, ९ महिना १५ दिन
ऋषि पञ्चमी १७ भाद्र, ९ महिना १६ दिन
ईन्द्रजात्रा २६ भाद्र, ९ महिना २५ दिन
संविधान दिवस ३ असोज, १० महिना ३ दिन
जितिया पर्व ५ असोज, १० महिना ५ दिन
घटस्थापना १२ असोज, १० महिना १२ दिन
बिजया दशमी २१ असोज, १० महिना २१ दिन
कोजाग्रत पूर्णिमा २६ असोज, १० महिना २६ दिन
करवा चौथ ३० असोज, ११ महिना ० दिन
धन तेरस ९ कार्तिक, ११ महिना ९ दिन
काग तिहार ९ कार्तिक, ११ महिना ९ दिन
कुकुर तिहार १० कार्तिक, ११ महिना १० दिन
लक्ष्मी पूजा १० कार्तिक, ११ महिना १० दिन
म्ह: पूजा ११ कार्तिक, ११ महिना ११ दिन
भाई टिका १२ कार्तिक, ११ महिना १२ दिन
छट पूजा १६ कार्तिक, ११ महिना १६ दिन
फाल्गुनन्द जयन्ती २५ कार्तिक, ११ महिना २५ दिन